…अनि पुलिसमा जागिर नखाएर भो ! « Drishti News – Nepalese News Portal
…अनि पुलिसमा जागिर नखाएर भो !
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार 12:39 pm
काठमाडौं । विसं २००८ को कुरा हो । काठमाडौँ, चाबहिलका कान्छा डङ्गोल र तरिमायाकी जेठी छोरी चैतमायालाई सरकारी भर्तीका लागि थुतेर लगियोे । विसं २००७ पछि प्रजातन्त्रको परिवेश र उमङ्गका बेला उहाँसहितका महिलालाई एक टोलीले एक्कासि लिएर सिंहदरबारमा तालिम दिन शुरु गरेको थियो ।
त्यो टोली अरू कोही नभएर नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध थिए । त्यस बेला महिलाको टोली चारूमती बहालमा महिला सशक्तीकरणको छलफलमा सरिक थिए । त्यहाँबाट नै चैतमायालगायतलाई सामूहिक रुपमा लगिएको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुअघि नेपाली काँग्रेसको मुक्ति सेनाले आन्दोलन गरिरहेको थियो । भर्खर प्रजातन्त्र प्रवेश गरेकाले सुरक्षा संरचना भर्खरभर्खर बामेसर्दै थियो ।
चैतमायाले झण्डै ३२ वर्ष प्रहरीमा सेवा गर्दा प्रहरी नायब निरीक्षक सइ हुने समय भएको थियो । “चिठ्ठी आउनै लाग्दा घरको समस्याले जागिर छाडेँ”, उहाँले सुनाउनुभयो । प्रहरी हुँदाका अनेक अनुभव उहाँसँग छ । “कति हेलाँ गर्थे त्यस बेला, सबै सहेर काम गर्नुपरेको थियो, सुरुसुरुमा डर पनि लाग्यो, लाज पनि हुन्थ्यो । अरुले ‘पुलिसनी’ जिस्क्याउँथे, पछिपछि हेलाँ गर्ने, जिस्क्याउनेलाई लखेट्थेँ”, उहाँले काम गर्दाका स्मृति सुनाउनुभयो । पाँच दिदीबहिनीमा उहाँसहित तीन जना प्रहरीमा लाग्नुभयो । उहाँले पछि माहिली बुद्धमाया र साहिँली श्रीमानीलाई प्रहरीमा लगाउनुभएको थियो । बुद्धमाया भने अहिले बितिसक्नुभयो ।